ကွကိုယ်လုပ် – DIY | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကွကိုယ်လုပ် – DIY
ကွကိုယ်လုပ် – DIY
Posted by ဇီဇီ on Jun 2, 2015 in Arts & Humanities, Environment, Home & Garden, How To.., Ideas & Plans, Know-How, DIY, Society & Lifestyle | 57 comments
မွေးမေလေ့နဲ့ သူ့ရဲ့ ရီဆိုင်ကယ်လာတွေ အကြောင်း ပြောပြအူးမယ်။
ခု အငြိမ်းစား ယူသွားတဲ့ နံပတ် ၂ ရဲ့ မွေးရပ်မြေကို ပြောင်းရတုန်းကပေါ့လေ။
ပြောင်းတုန်းက ကိုယ်က ၁၀ တန်းဖြေပြီး ချိန် လိုက်သွားတယ်။ နောက်တော့ သင်တန်းပြန်တက်လိုက် ပြန်လာလိုက်မှာ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန် အိမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက် ရှိနေပါရောလားး
ပိန်သမျှ လှပ်လို့၊ အရပ်ကလည်း အရှည်ကြီးး၊ လမ်းသွားရင် ကိုင်းကိုင်း ကိုင်းကိုင်းနဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ကို မီးခိုးထွက်အောင် သောက်တာ။
အာ့နဲ့ ဘယ်သူတုန်း ဘာတုန်းပေါ့။
မွေးမေလေ့က ပြန်ဖြေတယ်။ သူ့ ညာ လက် ရုံး တဲ့။
ဘယ်လက်ရုံး ရှိသေးလား ဆိုတော့ ရှိသေးသတဲ့။ အိမ် မှာ ကူဖို့ ခေါ်ထားတယ် ပြောတာပဲ။
စမြင်လိုက်တော့ မီးဖိုခန်းထဲ မွေးမေလေ့က ချက်နေတုန်း သူက ငုတ်တုတ်ထိုင် ဆေးလိပ်ဖွာနေတာ မြင်တာပဲ။
ညနေလည်း အစောပြန်တာ ယိုင်တိုင် ယိုင်တိုင် နဲ့၊.
ဘာလို့တုန်း ဆိုတော့ အဲဒါ ခွက်ပုန်းသောက်ပြီး မူးတူးတူး နဲ့ ပြန်သွားတာ။
အိမ် ကို အဲလို အဟောင်း တွေ လာသိမ်းရာကနေ တွေ့သတဲ့။
မွေးမေလေ့ ပေါ့။ သနားပြီး သံယောဇဉ် နဲ့ အိမ် အကူ ခေါ်ထားသတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ဒက်ဒီ ဦးဇီဇာက သူ့ အတွက် လုပ်ပေးဖို့ ကိစ္စတွေမှာ ကန့်သတ်ထားတာနဲ့ မွေးမေလေ့ပဲ ပင်ပန်းမြဲ။
ဒါဖြင့် ဘာလုပ်တုန်း ဆို မွေးမေလေ့ ရှင်းသမျှ သူက နောက်က သူ့ အတွက် လိုက်ကောက်တာလေ။
အေးတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ မခိုးမဝှက်၊ နားအေး၊ လို့ မွေးမေလေ့က အားဂျီးချစ်တယ်။
တခါသား မွေးမေလေ့ မန်းလေး သွားတုန်း ကိုယ်နဲ့ ထားခဲ့တာ ပြန်လာတော့ ငိုပြီး တိုင်သတဲ့။
မမလေး (သူက မွေးမေလေ့ထက်ကို ၁၀ နှစ်ကျော် ကြီးတာကို အဲလို ခေါ်တယ်) သမီးက တအားခိုင်းတတ်လို့ နောက်တစ်ခါ မထားခဲ့ပါနဲ့တဲ့။
ခိခိခိ၊ သများ ပညာပေးလိုက်တာ။
ဇော်သန့်ကို အေးလို့ တဲ့ အားဂျီးချစ်တယ်။
အဲ၊ နောက်တစ်ယောက်က မိသားစုလိုက် ဒေသလည်ပြီး ကောက်တဲ့ မိသားစု။
မသင်း တဲ့။ အသားဖြူဖြူ၊ ပုပု သွက်သွက်၊ စကား များများး ကိုယ်တွေ သား အမိနဲ့ အရမ်းကီးကိုက်လို့ သူ့ပဲ မျှော်ရတာ။
သူက ကိုယ့်ကို ချစ်သမားး၊
သူ ကိုယ်တိုင်က အကွက်မြင်၊ လာဘ်မြင်လွန်းလို့ နည်းနည်း ခိုင်း ရင် အလုပ် များများပြီး တာ။
မွေးမေလေ့ကတော့ ပြောတယ်။ မသင်း စကားပြောတာတော့ ခွင့်လွှတ်တယ် တဲ့။ စကား ပြောသလောက် အလုပ်ပြီးတယ်တဲ့။
နောက်ပြီး အမှိုက်တွေ ဖုန်တွေက မသင်းစကား နားထောင်သတဲ့ လေ။ နိုင်နင်းလွန်းလို့ တင်စားပြောတာ။
တစ်ခါသားးး ဆေးရုံကား က ကားတာရာတွေ လွှင့်ပစ်ဖို့ သူ့ ကို ပေးတော့ တစ်ခု ကို ထားခဲ့မတဲ့။
လုပ်စရာ ရှိလို့ ဆိုပြီးးး မြေနည်းနည်း တူးပြီး ကားတာယာ ကြီး တစ်ဝက်လောက် မြှုပ် ပြီး မြေကြီးတွေ ထည့်ပြီး အပင် စိုက်ပေးသွားတာ။
တာယာကိုလည်း ထုံးသုတ်သွားသေးတယ်။ အခု နောက်ပိုင်း အဲလို ပြန်သုံးတာတွေ မြင်တော့ သူ့ ကို အတော်အမြင်ရှိပါလား မှတ်ရတယ်။
ဘယ်လောက် ကျတုန်း မေးရင် “Freefall ပါ အမရယ်” လို့ ပြောသေးတယ်။
ကိုယ် က ကြောင် ပြီး ဘာပြောမှန်းမသိ။
မွေးမေလေ့ ရှင်းပြတော့မှ အဲ ဒါ ဖရီး (FOC) လုပ်ပေးတာ လို့ ပြောတာတဲ့။ ဘိုလို တွေကလည်း ညပ်ညပ်ပြောတာ အရမ်းးး၊ စကားပြောရင် လည်း အပိုစာဒါးလေးက ပါသေးတယ်။
“တွေ့ပြီမလား နာ့ ဘယ်လက်ရုံး အတွေးအခေါ်ရော အပြောအဆိုရော နည်းနည်း သာ ပညာတတ်ရင် နိုင်ငံခြား ရောက် လောက် ပြီ”
ပြီး ရင် တဟားဟား ရီ နေရောပဲ။
မွေးမေလေ့ တို့ မြှောက်စားရင် အိမ်ထိတောင် လိုက်လည်တာပါဆို။ မသင်းအိမ် ဆို မြင်ဖူးပါတယ် မှတ်တာ ကိုယ့် အိမ်က ပစ္စည်းချည်းပဲ။ သုံးတတ်လိုက်တာလို့ ပဲ စိတ်ထဲ မှတ်ခဲ့တယ်။
ပြောချင်တဲ့ အပိုင်းက ခုမှ ရောက်တာ။
ခု ဆက်ပြောမှာက အဲလို အိမ်သုံး ပစ္စည်းလေးတွေကို ဘယ်နားမှာ ဘယ်လို သုံးလို့ ရတယ် ဆိုတာ ရှာထားတာလေးတွေ မျှမလို့ပါ။
အရင်ကတော့ ပြပွဲ အကြောင်း ရေးဖူးတယ်။
ခေါင်းစဉ် အရတော့ Do It Yourself (DIY) ပေါ့လေ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အဆင့်အထိမရောက်ပါဘူးးး၊ လွယ်ကူသလောက်လေးပဲ စု ထား တာ။
ခုဟာကတော့ အိမ်မှာ ဘယ်လို ပြန်သုံးလို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာလေးတွေ ရအောင် ရှာထားတာ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဆို လုပ်ပျင်းတာမို့ လွယ်တာလေးတွေ ရှာထားတယ်။
ပထမဆုံး အိမ်မှာ အများဆုံး ထွက်တဲ့ တစ်ရှူးဘူး တို့ အလိပ်တို့ကို ပြန်သုံးလို့ရတာလေးတွေ ကြည့်ရအောင်။
ခုနကပြောသလို ကား တာရာတွေကို ဘယ်လို ပြန်သုံးလဲ ဆိုတာလေးးး
နောက်တစ်ခုက ပလပ်စတစ် ပုလင်းတွေ ကို ပြန်သုံးဖို့ အိုင်ဒီယာလေးတွေ။
ဒါလေးတွေက တခြား တိုစိတစ လေးတွေ
ဟိုနေ့က လုံမလေး ပို့(စ) ကို ဖတ်ပြီး စက္ကူအိတ် ချိုးနည်းလေးတွေ ရှာထားတာ။
ဒါက တီအေး နဲ့ ဘေတား တို့ ရဲ့ ထင်းရှူးပုံး အသုံးချနည်းတွေပေါ့။
ကော်မန့်ထဲက အရာတွေ နီးစပ်သလောက် ရှာထည့်လိုက်တယ်။
ဓာတ်ပုံများကို ဂူးဂဲ မှ အခမဲ့ ကူညီပါသည်။
ဘူ့ ကို ပေါဒါရဲငင်???
ရေသန့်ဗူးခွံနဲ့ အပင်ကလေးတွေ စိုက်ထားတာ ကြိုက်လို့ကိုယ်လဲစိုက်ကြည့်ဖူးတယ်… သူတို့လို ခြံထဲရှင်းသန့်မနေတော့ အလှဆင်တာနဲ့ မတူ…
သများးတော့ ဆီ ဘူးးး တွေ နဲ့ လုပ်ငန်းးစနေပြီ…
လုပ်ငန်းး စ ရအောင် အလုပ်ထဲ တာရာတွေ တစ်နေ့ တစ်ခု ဖွက်ယူခဲ့…
1) သတင်းစာစာရွက်တွေ၊အညိုရောင်ချောပို့စက္ကူ စာရွက်တွေကို အိတ်လုပ်သုံးရတဲ့ခေတ်ဆိုတော့,
ကော်ကြိုသုံးပြီးကပ်ရတဲ့ခေတ်ဆိုတော့,လက်ထိပ်တွေမှာကော်တွေစွဲပြီး ၊ အကပ်လိုက်ပြန်ခွာထုတ်ရတယ်။
2) ရွှေဝါဆပ်ပြာ,ဆင်ချေးတုန်းဆပ်ပြာတွေသုံးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့၊ဆပ်ပြာတွေကို ထင်းရှူးသားသစ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သေတ္တာတွေနဲ့ ပို့လာတယ်။အဖေကအဲဒီရွှေဝါဆပ်ပြာပုန်းသေတ္တာအခွံလွတ်ကို အပင်စိုက်တဲ့ပုန်းပြန်လုပ်ပြီးသုံးတယ်။ ကြက်သွန်နီ,ကြက်သွန်ဖြူတွေ အပင်ပေါက်ချိန်ရောက်လာရင်အညှောင့်အစို့တွေထွက်လာတော့၊ဝယ်သူတွေ မကြိုက်တော့၊ရောင်းတဲ့ထဲကနေဖယ်ရှားပစ်ပြီး၊ဲဒီရွှေဝါဆပ်ပြာပုန်းသေတ္တာအခွံလွတ်တွေထဲ မြေဆွေးနဲ့ မြေကြီးတွေရောသမပြီးစိုက်တော့တာပါ။ပြန်သတိရတယ်။ခေတ်တွေကွာဟသွားပေမဲ့။
လူတွေရဲ့တီထွင်ကြံဆမှုနည်းပညာကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ ဘာမဆိုလုပ်တတ်အောင်,ဘာမဆိုသိအောင်သင်ပေးတဲ့အဖေ့ကျေးဇူးတွေဆပ်လို့မကုန်နိုင်တာခံစားမိပါတယ်။
မှတ်စရာတွေ အများးကြီးး ပါလို့ စိမ်းးလိုက်ပါတယ် တီအေးးရေ..
တာယာနဲ့ကတော့ အရင်ကတည်းက ကြက်ဟင်းခါးသီးပင် ဘူးသီးပင်စိုက်ဖူးတယ်။ ရေသန့်ဗူးနဲ့လည်းစိုက်ဖူးတယ်။
ပို့စ်တင်ပေးး ပါ အူးးး မိုးးသူ
မကြီးးး လုပ်ငန်းး စ နေပြီ …
. လှလိုက်တာ ဇီရေ။ ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်။ နောက်ဆို ဘူးခွံတွေ လွှင့်မပစ်တော့ဘူး။ ကြည့်စမ်း၊ အနုပညာဟာ အမှိုက်တွေကိုတောင် လွှမ်းမိုးနေပါကလား !!
အမှိုက် ဆို တာ ထားးတတ် ရွှေ …
မထားးတတ်ရင် ပြသာဒ် ပါ မီးးလောင်နိုင်သတဲ့…
1) အုန်းဆီမွှေးတွေ(ခေါင်းလိမ်းဆီ)ကိုအရင်က လေးထောင့်သံစည်ပုန်းတွေနဲ့ လာတယ်။ အုန်းဆီထဲ့တဲ့သံပုန်းတွေအားသွားရင်၊ပုန်းအခွံလွတ်တွေထဲ မြေဆွေး,မြေသြဇာ,မြေကြီးတွေ၊ပြည့်လုနီးပါးထဲ့ပြီး
2) အိမ်ရှေ့ပါလာမှာသစ်သားစင်တန်းဆွဲပြီး၊အိမ်အပြည့်အလှဆင်ထားပြီး၊ပန်းပုန်းတွေ ညီညီစီတင်ပြီးထားထားတာ၊ဂန္ဓာမာက၊ဗေဒါရောင်,အဝါရောင်,အဖြူရောင်တွေစိုက်ထားတာ။ပွင့်ရင်ပန်းပုန်းတွေထဲမှာအရမ်းလှတယ်။ ပေါင်းမြက်တွေနဲ့ ပိုးမွှားကောင်လေးတွေမလာနိုင်ဘူး။ ပုန်းနဲ့ အလှစိုက်တော့သန်သန့်လေးစိုက်ထားလို့ရတယ်။ တိမ်ပြာပန်းဆိုလည်းအရမ်းလှတယ်။
အပင်ကြီးမျိုးတွေမဟုတ်တော့၊လေးထောင့်သံပုန်းတွေနဲ့ ထဲ့စိုက်လို့ရတယ်။ ပန်းပင်စိုက်တဲ့ပုန်းတွေပြန်လုပ်တယ်။
ထပ်စိမ်းးလို့ မရတော့ ပေမယ့် နည်းးတွေ မှတ် ထားး ပါပြီ တီအေးးရေ…
ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရင်တော့ ပန်းးမျိုးးးလေးးတွေ ဝယ် မလားး စဉ်းးစားးတယ်..
တနိုင် ပေါ့ လုလုလေးးရေ..
အိုင်ဒီယာ ဆင့်ပွားးလို့ ရတာပေါ့..
ကိုယ့်မှာက လုပ်ဖို့အချိန်က မကျန်တော့ဘူး။
ပင်တိုင် အားပေးးနေတဲ့ တီအေးးး ကို ကျေးးဇူးးးတင်ပါတယ်..
အဲလို reuse, recycle မျိုးဆို တီဒုံဦးဆောင်သော တီမမ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသည့် ဂေါက်အသင်းကြီးရဲ့ အကြိုက်ပေါ့။
အဲဒီ အသင်းကို သများးလည်းး ဝင်ရတော့ မလားး မသိ..
Aye KK လိုပဲ အဖေ့ကုန်စုံဆိုင်အတွက် စက္ကူအိတ်ခေါက်ခဲ့ရပါတယ်။စက္ကူအိတ်ချိုးပြီးရင် အလိုက်သင့်လေးဖြန့်ထား၊ အုန်းခွံတစိတ်ထိပ်ဖြတ်ပြီး ဘရပ်ရ်ှလုပ် ၊ကော်မှုန့်ကို ကိုယ့်ဖာသာ ကြို၊အဲဒီကော်ကို အုန်းခွံနဲ့ စက္ကူတွေပေါ်ဆွဲပြီး အိတ်ကပ်ခဲ့ရတယ်။
DIY တို့ရဲ့ ဖခင်ကြီးဟာ အရှင်အာနန္ဒာပါ။
ကောသလမင်းကြီးက သူ့မိဖုရားဝါသဘခတ္တိယာကို ပေးတဲ့ ၀တ်လဲတော် ၅၀၀ ၊မိဖုရားက အရှင်အာနန္ဒာကို သင်္ကန်းအဖြစ်လှူ၊ ၊ဘုရင်က မကျေနပ်လို့ ဒီလောက်များတဲ့ သင်္ကန်းတွေ ဘယ်လိုသုံးပစ်လဲမေးတော့ သင်္ကန်းဟောင်းကို ရေလဲ၊ခြေသုတ်ကနေအဆင့်ဆင့် နောက်ဆုံးတော့ နုတ်နုတ်စင်းပြီး နံရံတွေကို လိမ်းကျံတဲ့ထိ လွှင့်မပစ်စတမ်း သုံးသွားပြပါတယ်။
ထောင့်စေ့ လိုက်တာ ဆိုတာလေ အတုယူစရာပါ…
1) ငယ်ငယ်က အဖေက ထီဆိုင်ဖွင့်တော့ စက္ကူအိပ်တွေ အစ်မအေး နဲ့ အစ်မဒုံ ပြောသလိုဘဲကပ်ခဲ့ရတယ်…ထီထိုးတဲ့လူတွေက လည်း အတိတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ ရှင်ပြုရန်တို့ မင်္ဂလာ ဆောင် ရန်တို့ ရေးခိုင်းကြတယ် ပီးရင် အဲစက္ကူအိပ်လေး နဲ့ထည့်ပေးရတယ်…
2) အဖွားက အင်္ကျီချုပ်တော့ ပိုတဲ့ အစတွေ နဲ့ စပ်စောင် တို့ စပ် ကုလားထိုင် အစွပ်တို့ ချုပ်တော့ အကွက်လေး တွေ ဒီဇိုင်းဖော်ထားတာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် အဲဒါတွေကို ခုထိကြိုက်တုန်း …
3) အိမ်လှည်းတဲ့ တံမြက်စည်း တွေလဲ လုပ်တာဘဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တွေကို Recycle ပြန်လုပ်တာလေ…
ကျနော့ အဖေ ဆေးခန်းမှာဆို ပလပ်စတစ်အိပ်သေးသေးလေးတွေမတိုင်ခင်က
စက္ကူအိပ် သေးသေးလေးတွေ လုပ်ရင်လုပ်
DIY ဆိုလို့ စိတ်ထဲစွဲနေတဲ့ DIY တခု ဖောက်သယ်ချပျဇီ။
ဆိုင်ခန်းတွေ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆိုင်းဘတ် stand လုပ်တာမယ်လေ…
အမြင့် ၄ပေ .. အနံက တပေခွဲလောက် ရှိတဲ့ ၂ဖက်လှ stand ဆိုပါတော့…
ပုံမှန်က အလူမီနီယံနဲ့ လေးထောင့်ပုံး လုပ်ပြီး ဟိုဘက်သည်ဘက်
ပလတ်စတစ်ပြား တွေ ကပ်လို့ အထဲမှာ မီးချောင်းထည့်ပြီး Lightbox လုပ်ကြသဗျ…
ကုန်ကျစရိတ်ကမနည်းပါဘူး.. တတ်နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ…။
အဲ..သာမန် ရပ်ကွက်ထဲက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်လောက် ကုန်စုံဆိုင်လောက်ကျတော့ ဒါမျိုးလုပ်လို့ သိပ်မကိုက်ဘူးဗျ
ဆိုတော့ သည်လူတွေက ဘာနဲ့ အစားထိုးလုပ်ကြသလဲဆိုတော့..
လေတိုက်လို့ လဲမှာ မပူရအောင် ပိုက်ထဲ သဲထည့်တတ်ကြသေးတယ် (၀ိတ်ရှိတဲ့သဘော)
အလယ်မှာ တီ-ဆော့ကတ် ခံပြီး စိတ်ကြိုက် အမြင့်အတွက် ပိုက်ဆက်ယူတယ်..
lightbox တွေလို ပုံးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ အရိုးငြမ်းသက်သက် ထောင်ထွက်နေတာ…
ပြီးတော့ …စာသားအတွက် ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ ငြမ်းနဲ့တိုင်း ဆိုင်မှာ ဗီနိင်လ်းထုတ်ပြီး စွပ်ချတယ်…
အတော် ငွေကုန်သက်သာပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်လို့ရ သီးခြား ကျွမ်းကျင်မှု ပစ္စည်းကိရိယာလည်းမလိုသမို့
အဲဒီ အိုင်ဒီယာလည်း ကောင်းတာပဲ
DIY ရဲ့ တကဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သုံးမရဘူး ထင်ထားတာတွေကို
ဘယ်မှာသုံးရမယ် … ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းပြနိုင်လေ ကောင်းလေပဲ လို့ထင်တာပဲ။
ဒီမှာတော့ workshop အသေးစားလေးတွေ နဲ့ ကျောင်းတွေမှာ လုပ်သဟဲ့။
ဟိုတစ်ပိုစ့် ထဲကမန့်ချင်တာ မအားလို့ မမန့်လိုက်ရဘူး
ဇီဇီရေးတဲ့သိမ်းထုပ်သေချာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ခုလို ရီဆိုင်ကယ် ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဗေတားလည်း မှတ်မိတာလေးတွေရှိပါ့……
1) ငယ်က ဆို တောင်ကြီး ဘက်က စတော်ဘယ်ရီ လတိုင်းနီးပါးလူကြုံ ရတော့ ထည့်တဲ့ခြင်းပေါက်စလေးတွေက ချစ်စရာ မပြစ်ရက်စရာလေးတွေ…
ဗေတားမွေးသမိခင်က အဲ့ဒီခြင်းပေါက်စလေးတွေထဲမှာ အပင်သေးမျိုးလေးတွေ စုံနေအောင်စိုက်တော့တာ ဒန်းပန်း နှင်းဆီ တရုပ်နှင်းဆီ သစ်ခွ ကြက်သွန်မြိတ် နံနံပင် စုံပလုံစိနေတာ
2) အဖေ ပယ်ရယ်ဘားလွှဲတဲ့တန်းနှစ်တန်း သူ့ပန်းစင်ဖြစ်သွားတယ်……
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မကသေးဘူး ……
3) အိမ်မှာသောက်ရေအိုးနုတ်ခမ်းကွဲတို့ စဥ့်အိုးပဲ့တို့ဆို မပစ်ရဘူး သူ့ပန်းြံခထဲမှာ နေရာပေးလိုက်တာ ……
4) ဗေတားတို့ငယ်ငယ်က စုဘူးတွေကို ဝါးကျဉ်ထောက်နဲ့အကြွေထည့်စုတယ် ပြည့်ရင် ထက်ပိုင်းမခွဲခိုင်းဘူး အိမ်နားဖြတ်သွားတှဲုသူခေါ်ပြီး လွှနဲ့ အပေါ်အပေါက် နားကနေ အဝိုင်းလိုက် ဖြတ်ခိုင်းပြီး အဆစ်တစ်ဖက် ပိတ်ရအောင် လုပ် ပြီးမှ ယောက်မ ယောက်ချို ဇွန်းခွက် ဓါး ထည်ူစရာလုပ်ထည့်တယ်……
5) ဂျပ်စက္ကူ ပုံးတွေကို ဘေးချင်းကပ်ပြီးကော်သုတ်ကပ် အုတ်စီသလို စီပြီး စာအုပ်စင် ဖိနပ်စင်လုပ်ပေးတယ် ဖိနပ်စင် စာအုပ်စင် မှမဝယ်နိုင်တာ အဲ့တုန်းက……
6) နောက် စာကြည့်စားပွဲ မှာ မီးအုပ်ဆောင်း အတွက် ပလတ်စတစ်ပန်းကန် လုံး အဟောင်းကို အပါက်ဖေါက်တပ်ပေးတယ်
7) ဂလူးကိုစ့်ပလင်းကို ဂျင်ကြိုးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်ဆွဲပြီး အတော်ပူတော့ ရေအေးနဲ့ပက် ထက်ပိုင်းညီညီလေးပြတ်သွားတာကို အနားမရှရလေအောင် ဓါးသွေးကျောက်နဲ့ပွတ် နုတ်ခမ်းလုံးပြီး ဘောပင် ခဲတံထည့်စရာ လုပ်ပေးတယ် …
စုံနေအောင် ကို ရီဆိုင်ကယ်တွေသုံးခဲ့ရတာ ……
ခုအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတော့ မေ အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ တိုလီမုတ်စတွေကို ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပေမယ့်လည်း လိုအပ်ရင်ဆိုပြီး မပြစ်ရက် မပြစ်နျိုင်တော့ ပဲ ဗေတားတို့အိမ် အပေါ်ထပ်တစ်ဖပ်လုံး အဟောင်းအမြင်းအစုတ် အပြတ် အကျိုး အပဲ့တို့ပျော်စံရာ စတိုခန်းဖြစ်ရပါတော့တယ် …
ဗေတားကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးနဲ့ရီဆိုင်ကယ်ခဲ့တာလေးတွေလည်းရှိပါ့ နောက်မှထပ်မန့် ဦး မယ် …………
တီအေးးတောင် ၂ ခု လုံးး စိမ်းးဖို့ မဖစ်နိုင်တာ
ဗေတားး ပြောတာတွေ ပါ စိမ်းးချင်တော့ မခက်လားးး
မန့် ကနည်းတွေ ပို့စ် ထဲ ထည့်လိုက်မယ်နော်…
ကူးမားရ် (ခ) ဗေးတား(ခ) အဘဆွေ ကလဲ
အဲလို ရီဆိုင်ကယ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပို့စ်သတ်သတ်ရေးတင်ရင် ပိုပြည့်စုံသွားမယ် ထင်ပါတယ်
အဟောင်းကို အကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ပညာ က လဲ တကယ့်  ကိုထွင်ညာဏ်ရှိတဲ့လူမှ လုပ်နိုင်တာပါ
ကွကိုယ် လုပ်ဖူးပါ့ ဇီကလေးရယ်။
ပါရမီခံ က ကောင်း လွန်းတော့ အမှိုက်ခမျာ ပိုစုတ် တဲ့ အမှိုက်ဖြစ်သွားရရှာတယ်။ lol:-))
ကားတာယာ တွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသား။
ဒီမှာ ကားဘီးလဲ ရင် တာယာဟောင်း ကို ပစ်ခ ပေးရတယ်။
. နောက်ဆိုမပစ်ဘဲ ပန်းစိုက်ကြည့်မယ်။ ကျေးကျေး။
ကိုယ့် ပတ်ဝန်းးကျင်နဲ့ နီးးစပ်ရာ ယူ ရတာပဲ…
စမ်းသပ်ရင်းး ပစ်လိုက်ရလည်းး အရင်းးပဲပေါ့..
ပစ်မယ့် အရာ ကို စမ်းး ရသကိုးးး
အမေကအင်္ကျီဂါဝန်တွေနဲ့ စကဒ်ကို သူကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးတာပါ။
အလေအလွင့်မဖြစ်ရအောင်ဘက်စုံထောင့်စုံကနေလမ်းပြခဲ့အဖေနဲ့ အမေရဲ့ 
ဒီpostလေးက ဖတ်သူတိုင်းကို အကျိုးရှိစေတယ်။
ချုပ်တတ်ရင်ကျ အဲဒီ စပ်လုံချည်တွေက လှသဗျ။
နှစ်သက်လို့ပါ။ တီအေးfbထဲမှာ၊ပုံအနေနဲ့ တင်ထားရှိတယ်။
ကျော် ဝယ်ဖူးတယ် တီအေးရေ။
စပ်သားတွေရဲ့ ချုပ်ရိုးကို အကြီး ဖူးဖူးကြီးဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ထားသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဝတ်လိုက်တော့လည်း တစ်မျိုးကြည့်ကောင်းတာပါပဲ။
အနော် အရမ်းသဘောကျတာ.. မမကြီးရဲ့… အဟောင်းတွေ ပြန်သုံးရတာမျိုးတွေ.. ဟန်းမိတ်လုပ်ရတာမျိုးတွေ သိပ်ကြိုက်တာ.. ခုလို စုပေးတာ ကျေးကျေး…
အချိန်ရရင်တော့ လုပ်ပျော်တယ် လုံမလေးရဲ့။
ကားတာယာအဟောင်းတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Bolt နဲ့တွယ် ၊ အထဲမှာ မြေစေးဖြည့်ပြီး…
ဆင်ခြေလျှော (Slope) တွေ ၊ မြစ်ကမ်းပါးပြိုတာတွေမှာသုံးရင် အတော်အသုံးတည့်တယ်…
Sustainable Development မှာ Recycling က အဓိက အရေးပါသပေါ့ကွယ်…
တာယာတွေ အဆင့်ဆင့်ခင်းမြေကြီးထည့်ပီး လှေကားထစ်လုပ်ထားတာတွေ့ဘူးတယ်…
အပင်လေးတွေနဲ့ ဘေးမှာအလှဆင်ထားတော့ ကြည့်ကောင်းတယ်…
idea တယ်ကောင်းပါလားလို့ စိတ်ထဲက ချီးကျူးမိသေးတယ်…
အိမ်မှာ.. ကြိုးတွေတော်တော်ရှုပ်နေတာမို့.. ပါမုန့်အိပ်ညှပ်ပိတ်တာလေး..သုံးတာကိုမှတ်သွားတယ်…။
တစ်ချို့ ကေဘယ်တွေက တော့ မဆန့်ဘူးးး
များသော အားဖြင့်တော့ ကွန်ပြူတာတို့ ဖုန်းကြိုးတွေကတော့ အတော် အဆင်ပြေတယ်။
ပုလင်းးတွေ ကို ဒီနည်း နဲ့ ဖြတ်လို့ရ
.ဟိုးတုန်းက ပလပ်စတစ်လူသုံးကုန်ထည့်စရာခွက် ရှားသေးတော့…ရီဆိုက်ကယ်ပြန်သုံးကြတာများတယ်လေ
.ကျွတ်ကျွတ်အိတ်မပေါ်သေးတော့ သတင်းစာဟောင်း၊ဗလာစာအုတ်ဟောင်းလည်း ရီဆိုက်ကယ်
.ဘာပြောပြောလေ..ခုလို့ရီဆိုက်ကယ်အသုံးပြုပုံတွေစုတင်ပေးတာကျေးကျေးပါကေဇီရေ
လာအားပေးလို့ ကျေးကျေးပါ မိုက်မိုက်ရေ
အမကြီးကို ဒီပိုစ့်လေး ပေးဖတ်လိုက်တာ သဘောကျတယ်ဆိုလို့ မန်ဘာဝင်ပြီး မန့်ပါလားလို့တောင် ဆွယ်လိုက်သေးတယ်။
ဟင်းချက်ကောင်းသူ တစ်ယောက် တိုးလာတော့ မား ဟင်??
အဲဒါလေးတွေ က စိတ်ဝင်စားဘို့လဲကောင်း တကယ်လဲ အသုံးတည့် သဗျ သားတော်မောင် ကလဲ အဲဒါမျိုးလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က စာအုပ်ဆိုင်မှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေ မြန်မာလို ရှင်းလင်းချက်တွေ နဲ့ အဲဒီလို စာအုပ်မျိုး သားတော်မောင် ပြတာနဲ့ တအုပ်ဝယ်ခဲ့သေး
တညားး သင်ပေးး မယ်လေ
DIY နော် …
သများရီဆိုင်ကယ်ကတော့ အဟောင်းလှည်းမျှော်ရတာပဲတနေ့တနေ့ ခိခိ။ ငယ်ငယ်ကတော့စုံနဖာစိအောင်လုပ်ဖူးဒယ် မှတ်တမ်းမှတ်ရာမကျန်ခဲ့တာနှမျောမိတယ်။ တကယ်ဆို သများငယ်ငယ်ကတဲကဖုန်းပေါ်သင့်တာနော် ကားတာယာနဲ့အပင်စိုက်တာတော့ ဟိုနေ့ကလမ်းလျောက်သွားရင်းတအိမ်မှာတွေ့ခဲ့လို့ ဒီတခါတာယာလဲရင်အပင်စိုက်မယ်လို့တေးထားခဲ့သေး။ နောက်နေ့မှလူလစ်ရင်ဒါ့ပုံရိုက်ယူခဲ့မယ်
ဟို bookmark ချိုးး နည်းးလေးးး သိချင်
ပေးမယ်မနက်ဖြန် ပြန်ရှာရအုံးမှာမို့ ခိခိ
အကုန် Copy ကူးပြီးမှတ်သွားတယ်
အဟောင်းဆို ရောင်းစားဖို့လောက်ပဲ ကြံနေတာ။